Home AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Ndị egwuregwu bọọlụ France Djibril Cisse Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu
LB na-egosi Full Story of a Footballer Footballer onye kacha mara aha na aha njirimara; “Acha Ọcha”.
Anyị Djibril Cisse Child Story Plus Na-enweghị Nkọwa Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site na nwata ruo n'oge.
Nkọwa nke Ex-Liverpool Legend gụnyere akụkọ ndụ ya tupu ama aha ya, ndụ ezinụlọ ya na ihe ndị ọzọ gbasara ya.
Ee, onye ọ bụla maara banyere ọdịdị anụ ahụ ya na ọrụ ezumike nka ma mana ole na ole na-ele Djibril Cisse's Bio nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a na-enweghị adieu ọzọ, ka anyị bido.
Djibril Cisse Childhood Akụkọ - Mmalite Ndụ na Ezinụlọ:
Djibril Cisse mụrụ na 12th nke August 1981 na Arles, France. A mụrụ ya nne ya, Karidiata Cissé na nna, Mangué Cissé.
Ha abụọ bụ nne na nna Ivorian. Djibril bụ nwa nke asaa na nke ikpeazụ nke ezinụlọ ya.
Ọ malitere ịkụ bọl ozugbo o nwere ike ịga ije na-ekele nna ya na ndị na-agba ọsọ mbụ bụ ndị duziri ya ka ọ bụrụ football dị ka egwuregwu naanị ya.
N'ime afọ 1989, mgbe ọ dị afọ 7, Young Djibril bịanyere aka na ụlọ akwụkwọ ụlọ akwụkwọ ya na ụlọ ọgbakọ bọọlụ ya, AC Arles nke megharịrị ọhụrụ kwa afọ 1-2 ka o nwere nnukwu ọganihu ma tolite otu egwuregwu bọọlụ ya.
Mgbe afọ asaa gasịrị na klọb na iji nweta ahụmịhe ka mma, Cisse gbanwere n'etiti usoro ntorobịa dị iche iche.
N'ikpeazụ, ọ gụsịrị akwụkwọ na nke mbụ nke usoro ntorobịa Auxerre club na 1998.
Mgbe ọ gụsịrị Auxerre maka oge isii, merie ihe mgbaru ọsọ 90 na 166 anya, ọ kwagara Liverpool Premier League na 2004. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Jude Littler na Djibril Cisse Storyhụnanya Akụkọ:
Ndị na-agba ọsọ French na-abụkarị ihe mgbaru ọsọ maka mkpakọrịta nwoke na nwanyị n'ihi ntutu isi ya nke na-akpali ụmụ nwanyị na-acha ọcha bụ ndị gbara ya gburugburu dị ka sharks.
Mgbe ọ ghọrọ onye ọkpụkpọ Liverpool, ndị mmadụ maara na ọ bụ naanị oge tupu ya ejide ya.
Mgbe izu ole na ole gachara Liverpool, Djibril Cisse malitere ezigbo mmekọrịta ya na onye bụbu onye na-edozi isi, bụ Jude Littler onye si na Anglesey, agwaetiti dị na Wales.
Na 18 June 2005, Djibril Cissé lụrụ Jude Littler. Ememe agbamakwụkwọ ahụ weere na Castle Bodelwyddan, tinyere ndị ọbịa mara ama gụnyere Shaun Wright-Phillips na ndị otu mba France nke Cissé Louis Saha na Sylvain Wiltord.
N'ikwu nke a, nnọkọ oriri na ọ hadụ hadụ ahụ nwere ihe dịka ndị ọbịa 200, gụnyere ụfọdụ nnukwu aha-ụwa n'oge ahụ dịka Steven Gerrard, Zidine Zidane na Thierry Henry.
Ejiri ejiji Cissé dị iche iche ma bụrụkwa onye ọ bụla Liverpool hụrụ n'anya. Ọ lụrụ na tuxedo na-acha ọbara ọbara nke Liverpool niile na-ekele nwunye ya na onye Liverpool na-akwado ya nke gbara mbọ hụ na ọ na-agba agba klọb ya.
A na-eme atụmatụ na Millionaire Cisse nwere agbamakwụkwọ fild 100,000 na Bodelwyddan Castle na 2005 tupu ya abanye n'otu ụlọ ndị Cheshire.
Djibril Cisse withmụaka na Jude Littler:
Tupu agbamakwụkwọ ha, di na nwunye ahụ nwere ụmụ atọ bụ; Cassius, Prince Kobe na Marley Jackson. Dika nke a, Cissé nwere nwa ya, Ilona, ​​site na mmekorita nke mbu.
Djibril Cisse Jude Littler orgba alụkwaghịm Akụkọ:
Di na nwunye ahụ gbara alụkwaghịm na October 2014 mgbe afọ 7 nke alụmdi na nwunye n'ihi ekwesịghị ntụkwasị obi. Ejikọtara ụlọ ọrụ ha gụnyere ego nke ndị egwuregwu bọọlụ.
N'ịbụ onye na-awụ akpata oyi n'ahụ na enweghị Cisse maara, Jude Littler nwunye ya bụbu jiri ịgba egwu na ịgba alụkwaghịm gosi alụkwaghịm achicha achicha nke n’egosipu nwunye di ire.
Ọbụna ọ gara na-akpọrọ ụmụ ha gaa BBC5 Show ka ha kwuo banyere obi mgbawa ya na nkewa ya, na-ekwu na ọ hapụrụ "Ihe mgbu nke agaghị agabiga".
Ọ bụ ezie na ọdịdị Jude na ihe ngosi a kpaliri nkwado na mgbasa ozi mgbasa ozi site n'aka ndị na-eto ya, ndị ọrụ Twitter boro ya ebubo na-ebo ya na ụmụ nwanyị ebubo na ihe ngosi nke ime ihe "Igwu na-egwu egwu".
Mgbe ọ nụrụ banyere ihe nkiri ahụ, Cisse malitere iwe iwe megide Jude na Twitter wee kwuo na iwe were ya na ọ hapụrụ ụmụ ha atọ ka ha see vidio na TV mgbe ha na-ekwurịta alụmdi na nwunye ya.
Djibril Cisse gara n'ihu ịzaghachi na posts atọ. Ọ sịrị: "OMG, ị na-ebe ákwá na ị gaghị enwe ego iji zụlite ụmụaka na ị na-egbu maramara na ụgbọ ala f …… ke u g ọchị."
Echegbula onwe m, m ga-agwa m n'akụkụ nke akụkọ. U cant full people like this up * nk… “Igosiputa umuaka na igwe onyonyo nke bekee. Nke a bụ… .. Ihere. Agaghị m anabata nke a. ***.
Mariega n'ihu na Marie-Cecile Lenzini:
Mgbe arụmụka dị na alụmdi na nwunye gasịrị, ha abụọ gara n'ihu maka ọdịmma. Cisse mechara kerịta foto gosiri ya ịhụnanya ọhụụ Marie-Cecile Lenzini, na-ede:
“Mgbe afọ anọ gachara, ị ka na-ekwu maka m? Nweta ndụ, mee m, chọta ịhụnanya. ”
Ọzọkwa, Marie-Cecile Lenzini dị ka nwunye ya mbụ ghọrọ onye hụrụ n'anya wee keta afụ ọnụ.
Mgbe Cisse gara n'ihu, ọ gbara mbọ hụ na ụmụ ya kacha mma. Taa, Cassius Cisse, nwa mbụ, na nwa Djibril Cisse na-agbaso nzọụkwụ nna nna ya. Ọ bụ League One ugbu a ka ọ bịanyere aka na ya.
Djibril Cisse Ndụ Ezinụlọ:
A mụrụ Cissé nye ndị nne na nna Ivorian na France na ezinụlọ nwere ọgaranya. Ọtụtụ ndị ezinụlọ ya gụnyere Jibril Cisse ghọrọ ndị Roman Katọlik si Islam.
NME: Mangué Cissé Djibrila bụ onye na-agba ọsọ Ivorian nke na-egwuri egwu. Na 1970 ọ ruru ọkara-ikpeazụ nke iko mba Afrịka.
Ọ nwụrụ na 30 Septemba 2009 mgbe ọ rịachara ọrịa ogologo oge. N'okpuru bụ foto nke Djibril Cisse na nna ya.
Nna ya nwụrụ anwụ Mangué Cissé (nke dị n'elu) bụ ọkachamara n'ịgba ọsọ na onye isi obodo ya tupu nne na nna ya akwaga France na 1974.
A maghị ọtụtụ ihe banyere nne Djibril Cisse, Karidiata Cissé belụsọ n'eziokwu na ọ bụ nwunye na-arụ ọrụ oge niile.
SIBLINGS: 'Smụ nwanne Jibril Cisse gụnyere; Nma Cisse (nwanne), Seni Cisse (nwanna nwoke), Damaye Cisse (nwanne), Hamed Cisse (nwanne), Fode Cisse (nwanne) na Aboubacar Cisse (nwanne).
Djibril Cisse Ndụ Nke Onwe:
Djibril Cisse nwere àgwà ndị a na àgwà ya.
Ike Djibril Cisse: Ọ bụ onye okike, onye na-acha ọcha-nke na-acha ọcha, onye na-emesapụ aka, onye nwere obi ụtọ, na-enwe obi ụtọ, na-atọ ọchị
Adịghị ike Djibril Cisse: Ọ pụrụ ịdị mpako, dị isi ike, na-enweghị mgbagha.
Ihe Djibril Cisse nwere mmasị: Ụlọ ihe nkiri, na-eme ememe, ịzụta ihe dị oké ọnụ ma soro ndị enyi na-ekpori ndụ.
Ihe Djibril Cisse anaghị achọ: A na-eleghara ya anya, na-eche eziokwu siri ike ihu, na a dịghị emeso ya dị ka eze.
Na nchịkọta, Djibril Cisse dị ịrịba ama, ihe okike, inwe obi ike, nke kachasị ma sie ike ịjụ. O nwekwara ike ime ihe ọ bụla ọ chọrọ n'akụkụ ọ bụla nke ndụ ha na-eme.
Djibril Cisse igbu:
Ọtụtụ ndị ọrụ ịntanetị achọwo okwu ahụ; Djibril Cisse tattoo na ihe ha pụtara. Eziokwu bu; Ọnọdụ Djibril Cisse jupụtara na tattoos.
O nwere ihe karịrị ọrụ aka 40 ji mma ifuru chọọ akara ya, akara ndị China na otu ududo ududo na nku ya na aha ụmụ ya.
Djibril Cisse tattoo Djibril Cisse nwere ihe mgbakwunye ama ama. Ọ dịghị mgbe ọ na-eleghara anya nke na-agụnye igosi ahụ ya.
Djibril Cisse Biography - Ndụ Ezumike ezumike nká:
Onye France, onye lara ezumike nká na 2015 mechara kpebie ime mgbanwe na mkpebi ezumike nká ya.
Mgbe o kwusịrị akpụkpọ ụkwụ ya n'ikpeazụ, Cisse malitere itinye uche na ịmalite ọrụ na DJ, egwu, ịgba egwu na ejiji.
N'oge na-adịbeghị anya, Cisse na-ewu ewu n'oge na-adịbeghị anya Ịgba egwú na kpakpando na France, nke a makwaara dị ka Nditịm Bịa egwú.
Ọ bụ kpakpando nwoke mbụ a ga-ekwuputa maka oge ngosi nke isii, dị ka mirror.
Onye nwe Manor:
Na 2005, mgbe ọ kwagara Liverpool, Djibril Cissé zụtara ụlọ obibi na obodo Frodsham, Cheshire, na ime nke a, ọ ghọrọ Onyenwe nke Manor nke Frodsham.
N'oge na-adịghị anya mgbe ịzụrụ ụlọ ahụ, mkpebi ya ịjụ Cheshire Forest Hunt ikike ịchụ nta na ala ya natara mkpuchi dị egwu.
Na-ewepụ ndị obodo obodo site n'ịkwụsị ịchụ nta si n'elu ụgbọ mmiri itoolu ya; Achọghị m ịma ihe ha chere maka m - a hụrụ m anụmanụ n'anya, " ọ gwara The Guardian Sports.
Mgbe ịzụrụ ụlọ a Cisse ketara aha Onyenwe anyị bụ Manor nke Frodsham, nke pụtara na Jud ghọrọ "Onyenwanyị".
Djibril Cisse Njide:
N'ọnwa Ọktọba 2015, Cissé bụ otu n'ime mmadụ anọ ejidere na France maka mgbali a gbara mbọ imebi ndị ọgba bọọlụ mba ụwa na atụmatụ ịkwa iko.
E jidere ya n'ihi na a na-enyo enyo na ọ ga - eme ka ọ bụrụ mkparịta ụka na - agụnye onye ọgbọ Mathieu Valbuena, ma a tọhapụrụ ya na-enweghị ebubo ọ bụla.
Cisse na Valbuena abụrụla ndị otu na otu egwuregwu mba France yana yana klọb maka Marseilles n'etiti 2007 na 2009.
N'otu mbipụta ahụ, Karim Benzema, nke ọzọ kpakpando bọlbụ, ejiderekwa n'ihe metụtara otu ịkwa iko nke nwoke na nwanyị.
Cisse ekwetaghị ebubo ọ bụla, "Enweghị m ihe jikọrọ ya na ya, Mathieu bụ enyi m," dabere na France 24.
Otu onye ọka iwu na France kwuru na ajụrụ Cisse n'ihi na ọ ma ndị ọzọ so na nkata ahụ mana echeghị na ọ bụ otu n'ime ndị isi ojii ahụ n'onwe ya. Cisse na Benzema gbanahụrụ mkpọrọ afọ ise.
O doro anya ma ọ bụ n'ezie na teepu na ajụjụ dị na vidiyo ma The Daily Mail ekwu na a na-ekwu na ọ bụ Valbuena na nwa agbọghọ na-ekere òkè na omume ahụ.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụAnyị Djibril Cisse Nwatakiri Akuko na akuko ihe omuma. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ na ị hụ ihe na-adịghị ele anya n’isiokwu a, biko tinye okwu gị ma ọ bụ kpọtụrụ anyị !.